Ukwahlukana apho! - I-Airbnb
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguJérôme
I-wifi ekhawulezayo ye-122 Mbps kunye nendawo ekhethekileyo yokusebenzela kwindawo esetyenziswa ngumntu wonke.
Ngokuqinisekileyo ngendalo, isitudiyo seholide kwisakhelo somthi esinomgangatho ophakamileyo wokusingqongileyo ocetyiswe nguJérôme, siya kwanelisa abalandeli bendalo kunye nokuhamba intaba yazo zonke iintlobo! Ibekwe ngokufanelekileyo, "Ukuqhekeka apho!" iya kunika iindwendwe zayo ithuba lokunandipha zombini zendalo kodwa kunye nobutyebi benkcubeko yengingqi yeAlsace. Ukongeza, ilali ibonelela ngazo zonke iinkonzo zokuhlala uphumle ngaphandle kokusebenzisa imoto yakho kunye nokulala kwi-terrace ejonge emazantsi!
Istudiyo esizimeleyo esiyi-30 m2 sitsha kwaye sihonjiswe kakuhle. Ineebhedi eziyi-4 ezikhoyo (igumbi lokulala eliyi-1 elinebhedi elala abantu ababini kumgangatho osezantsi kunye ne-mezzanine eyi-1 enebhedi elala abantu ababini), inekhitshi, igumbi lokuhlambela negumbi lokuhlala elivulekileyo kwindawo enkulu yabucala. Ukubhalisa xa ufika kudla ngokwenziwa ngumbuki zindwendwe onokukucebisa ngezinto ezinomtsalane zasekuhlaleni ezahlukahlukeneyo.
Yonwabela inkonzo entsha "yokuhlamba yaseNordic", ngeendleko ezongezelelweyo, evulekileyo ukususela ngo-6 ebusuku ukuya ku-10 ebusuku yonke imihla (kuxhomekeka kumathuba ombuki zindwendwe) kunye nonyaka wonke (i-30 euros kubantu abadala abayi-2, iiyure ezi-2 okanye i-45 euro kubantu abadala abayi-4, iiyure ezi-2, abantwana bafumaneka simahla), ukuba babhukishwe kwiiyure eziyi-24 kwangaphambili !
Uya kufumana elalini izinto eziyimfuneko ukuze ukonwabele ukuhlala kwakho ngaphandle kokusebenzisa imoto yakho (indawo zokutyela, ivenkile ethengisa ukutya eneemveliso zasekhaya kunye nendawo yokugcina isonka, iposi kunye nevenkile yecuba, imakethi encinci yeveki, umatshini wemali kunye nogqirha).
Umbuki zindwendwe ngu- Jérôme
UJérôme uya kube elapho ukuze acebise abahambi bakhe njengoko kuyimfuneko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Grendelbruch